Manandrana Fanoherana Tsy Misy Herisetra “Ny Vondron’ny Fandriampahalemana” Any Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2015 6:55 GMT
Nankalaza ny faha 18 taonany ny Vondron'ny Fandriampahalemana any San José de Apartadó ny volana Martsa 2015 . Sary: Nikki Drake
Ity lahatsoratra ity izay nosoratan’i Nikki Drake dia navoaka voalohany tao amin’ny tranonkalan’ny NACLA ary averina havoaka eto ao anatin’ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ankehitriny, mihoatra ny roa taona isika no tao anatin’ny fifampidinihana momba ny fandriampahalemana Kolombiana. Nivory tany “Havana” ny mpanelanelana ho an'ny governemanta Kolombiana sy ny tena mpifanandrina aminy, ny Tafika Mitam-piadiana Revolisionera ao Kolombia (FARC), ka nanandrana nampitovy hevitra tao anatin’ny fifandresen-dahatra sarotra mba hifaranan’ny fifandirana mitam-piadiana efa naharitra ela tao amin’ny firenena. Mandritra izany fotoana izany, raha mbola mitohy ny fifampidinihana, niezaka ny hampihena ny herisetra ny vondrom-piarahamonina sasany amin’ny fanalavirana mavitrika sy azo itokiana ny antoko lehibe rehetra mifanandrina. Iray amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ny Vondron’ny Fandriampahalemana (PC) ao San José de Apartadó ao amin'ny departementa avaratra-andrefan'i Antioquia.
Mikatsaka ny hialàna amin’ny fiitarihana bebe kokoa ho any amin'ny fifandirana mitam-piadiana ao anatin’ny firenena ny Vondron’ny Fandriampahalemana, izay noforonin'ny tantsaha mpamboly tamin'ny taona 1997, amin’ny fanoherana am-pilaminana ny fibodoana ny taniny ataon’ireo mpisehatra roa mitam-piadiana tohanan'ny governemanta sy ny mpanohitra. Hatrany am-piandohana, tsy nety nandray anjara tamin’ny fandaharanasan’ny governemanta momba ny fiarovana izay nampiroboroboina, fantatra amin’ny anarana hoe CONVIVIR ny mpikambana ao amin'ny PC – izay, ankoatra ny zavatra hafa, nampiasa olon-tsotra ho toy ny mpitsikilo manohitra ny tafika mpiady anaty akata. Nanimba ny tsy fironan'ilay vondrona ny fandraisany anjara amin'io fandaharanasa io—iray amin'ireo fitsipika fototra nataony—ary mety hitarika herisetra lehibe kokoa.
Taorian'ny famonoana tamin'ny taona 2005 namoizana ain'olona fito mpikambana avy amin'ny Vondron’ny Fandriampahalemana, izay tamin’izany fotoana izany ny filoha —sady governoran'i Antioquia teo aloha—Alvaro Uribe nanameloka ny mpiady anaty akata FARC, niampanga ampahibemaso ny mpitarika ny PC ” ho miasa ho an'ny FARC ary ” te-hampiasa ny Vondron’ny Fandriampahalemana mba hiarovana io fikambanana mpampihorohoro io.” Na izany aza, nofaritan'ny Mpampanoa Lalànan'i Kolombia taty aoriana fa nataon'ny vondrona milisy Hery Fiarovan-tena Mitambatra ao Kolombia (AUC) ilay famonoana, niarahany nandrindra tamin'ny Borigady faha-17-n’ny Tafi-pirenena Kolombiana. Nisy sampam-panjakana sy mpitandro ny filaminana voarohirohy tamin'ny fanaovana herisetra tamin'ny vondrom-piarahamonina Kolombiana nandritra ny taona maro. Uribe mihitsy no voampamga ho manana fifandraisana amin'ireo vondrona milisy nandritra ny naha mpanao politika azy. Nisy fanadihadiana ofisialy natao taminy ny taona 2013, nefa voafidy ho Loholona Kolombiana izy ny volana Martsa 2014, ka nijanona ho hery ara-politika matanjaka — mpanohitra ny fitantanan’i Santos sy ny manodidina ny fifampidinihana momba ny fandriampahalemana amin'izao fotoana izao.
Saika hatramin'ny nitsanganany, voaaron'ny fepetra fiarovan’ny Fitsarana Iraisan’ny Amerikana Momba ny Zon'olombelona (IACHR), anisan’ny Fikambanan’ireo Firenena Amerikana (OAS), ny Vondron’ny Fandriampahalemana. Mitaky ny fanajàna sy ny fiarovan’ny fanjakana Kolombiana ny Vondron’ny Fandriampahalemana ireo fepetra ireo, ary koa ny fanadihadiana ny heloka bevava natao tamin'ny mpikambana tao aminy. Na izany aza, rafitra tsy manana fahefana ny OAS amin’ny resaka fampiharana, mifototra amin'ny fanerena ara-politika iraisam-pirenena ho toy ny fitaovany amin’ny fampiharana ny fanapahan-kevitra. Nanamafy ny fepetran’ny IACHR tamin'ny taona 2003 sy 2007 ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana Kolombiana (CCC). Mandràra ny fahefam-panjakana sy ny manam-pahefana ao amin’ny governemanta Kolombiana tsy hanaratsy na hanala baràka ny mpiaro ny zon'olombelona toy ny PC sy ny fikambanana miaraka aminy ireo torolàlana fanampiny eo anivon’ny firenena. Na izany aza, matetika no tsy noraharahiana ireo didim-pitsaràna sy taridàlana ireo.
Tamin'ny 2012, nandidy ny governemanta Kolombiana ny CCC mba hanaraka ny teboka dimy ho valin'ny fangatahana nataon'ny Vondron’ny Fandriampahalemana mba hamerina amin'ny laoniny ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny fanjakana. Nitaky “fialantsiny ampahibemaso ofisialy” ataon’ny fitondrana ankehitriny ao Kolombia ny teboka voalohany, noho ny fanambaràna manala baràka nataon'ny filoha teo aloha Uribe. Tonga tamin'ny Desambra 2013 ny fialantsiny ary tao anatin’izany no nandàvan’ny Filoha Santos ny “fiampangàna tsy marina natao tamin’ilay Vondrona,” miaiky ny fisiany ho toy “ny fiarovana be herim-po ny zon'ny Kolombiana, nikiry amin’ny ezaka mba hisian’ny fandriampahalemana ho an'ny firenena na dia niaina ny ady tany am-piandohana aza.”
Natao hihazonana ny tahotra sy ny fanenjehana ny lasa ny teboka faharoa mba ho tonga zava-marina, amin'ny alalan'ny fitakina amin’ ny fanjakàna hanolotra drafitra ho fisorohana ny fitsaratsaram-poana ho avy rehetra atao amin'ny Vondron’ny Fandriampahaleman’i San José de Apartadó. Raha nahavita ny fampanantenàna ho an’ny taona 2014 ny fe-potoana voalohany, nanomboka niely tao amin'ny vaovaom-pirenenana an-gazety ny fanehoan-kevitra ratsy sy fanaratsiana ny PC ary ny fikambanana miaraka aminy, avy amin’ ny mpifehy ny andian-tafi-pirenena ao an-toerana, tsy ampy herintaona akory taorian'ny fialantsiny nataon’i Santos.
Tamin'ny Oktobra 2014, ohatra, ny fandaharana amin’ny fahitalavitra antsoina hoe Testigo Directo (Vavolombelona Nanatri-maso) dia namaritra ny Vondron’ny Fandriampahalemana ho toy ny “efitra ambanin'ny tany izay tsy azon’ny manam-pahefana hidirana… izay azo antoka na ambara fa itantanan-dry zareo na iarahany mitantana amin'ny FARC.” Mikendry ireo fikambanana tsy miankina (ONG) iraisam-pirenena sy ny IACHR ho nampiasaina hiantohana ny fiarovana ny tafika mpanao ady anaty akata ao an-toerana ny fanehoankevitra hafa. Namoaka resadresaka tamin'ny Kolonely Germán Díaz Rojas ilay fandaharanasa, ny komandin'ny Borigady faha-17— vondrona ara-tafika natao hiantoka ny fanaraha-maso ao amin'ny faritra misy ny PC—tamin’izany no nanamelohany mafy sy nanalàny baràka ny PC sy ny mponina manontolo ao amin’ny firaisam-pokontany izay misy azy, nilazàny fa “avy amin'ny Vondron’ny Fandriampahalemana ao San José de Apartadó ny ray aman-drenin’izy ireo…ary teraka tao sy nobehazina tao ny ankamaroan'ny ao amin'ny laharan'ny miaramila mpiady anaty akata.” Iray amin'ireo maro nataon’ny Kolonely Rojas ilay resadresaka, ary be ny fanambaràna imasom-bahoaka mitovy amin’izany koa no nataon'ilay mpitarika ny Borigady Mandehandeha faha-11 sy ny miaramilany any an-toerana.
Tsy zava-baovao ny ezaka mba tsy haha-ara-dàlana sy handemena ny Vondron’ny Fandriampahalemana ary ireo Fikambanana Iraisam-pirenena Tsy Miankina. Efa ela no niambina/nanara-maso ny faritra ireo vondrona ireo, nanameloka ampahibemaso ny hetsika ataon’ny tafika tsy ara-dalàna sy ara-dalàna izay manitsakitsaka ny taridàlam-pirenena sy ny didim-pitsaràna, ary matetika tsy miraharaha ny fiarovana sy ny zo sivily iantohan'ny lalàna iraisam- pirenena amin’ny maha-olombelona. Ny fanamelohana imasom-bahoaka sy ny famelezana amin’ny haino aman-jery toy izany no nampiasaina tamin'ny 2009 sy 2010, natao an'ireo sampana tafiditra amin'ny raharaham-pitsaràna mamely ny Borigady faha-17 izay manana tantara amin'ny fanendrikendrehana sy ny fiampangana ofisialy mikasika ny famonoana, famindràm-ponenana an-terisetra sy ny fifandraisana amin'ireo vondrona milisy.
Mihoatra noho ny ezaka nataony mba hihazonana ny fanjakana Kolombiana sy ny vondrona mitam-piadiana ho tompon'andraikitra, manana zavatra efa nirian’ny mpandray anjara rehetra mandrakariva ny Vondron’ny Fandriampahalemana: tany. Nandritra ny taona maro, ny faniriana tany tao Kolombia dia betsaka no mifandray amin'ny fametrahana ny fianjadiana ara-politika, ny fanaraha-maso ny famokarana coca, ny fitanterana sy ny fananan-tany midadasika ho an’ny fiompiana biby, ary toeram-pambolena akondro ny zarina (palmier) fakàna menaka. Manerana ny firenena, nitondra fandrahonana, famindran-toerana sy famonoana ny ezaka nataon'ny isam-batan'olona sy ny vondrom-piarahamonina mba hihazonana ny taniny. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nahafahana nampitombo ny fidiran’ny fampiasam-bola avy any ivelany sy ny fampandrosoana ny tombontsoa ny fitomboan'ny tinady iraisam-pirenena ho an'ny harena voajanahary, mahatonga ny tany ho be mpitady kokoa avy eo. Nanomboka ny taona 2012, nahazoana na nangatahana alàlana ho amin’ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany ny 40 % ny tany ao Kolombia.
Hita manamorona ny tandavan-tendrombohitra Abibe ny Vondron’ny Fandriampahalemana, faritra stratejika ara-tantara ho an’ny mpisehatra tsy ara-dalàna mitam-piadiana sy ny fitaterana ireo coca izay hita eo anelanelan’ny departemantan’i Antiokia sy Córdoba. Tena nirian’ny indostria fitrandrahana arintany, solika, ary volamena fatratra ilay faritra. Na dia eo aza ny maha faritra tena ahitàna tafika marobe ao aminy, fantatra ihany koa amin’ny habetsahan’ny milisy ao aminy ilay faritra. Iray amin'ireo fikambanana vitsy eo an-toerana izay mbola manohitra ny fifehezana ataon’ny vondrona mitam-piadiana ary ireo orinasa iraisam-pirenena miha-mahazo laka ao ny PC, ary iray amin'ireo vitsy mbola manasongadina ny fifandraisana misy eo amin’ireo fikambanana ireo sy ny Fanjakana.
Niaiky ny tsy fahampian'ny fifehezan'ny fanjakana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny ady mahery vaika sy ny faritra manana loharanon-karena ny Mpanaramaso Ambony ao Kolombia. Ny ahiahiny hoe “tsy miraharaha ny fiantraikany amin’ny maha-olona, ny tontolo iainana sy ny toekarena ara-tsosialy” ny modelin’ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany amin'izao fotoana izao no nahatonga ny tolokeviny hampitsaharana ny fifanarahana vaovao hitrandrahana harena ankibon’ny tany any amin'ireo faritra hisian’ny ady . Nahatsapa ihany koa ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàm-panorenana Kolombiana fa “any amin'ny faritra sasany ao amin'ny firenena dia mazava fa manana fifamatorana ireo mpisehatra amin'ny fifanoherana mitam-piadiana sy ny tombontsoa ara-toekarena, singa iray amin'ireo antony lehibe indrindra mahatonga ny famindran-toerana an-terisetra”
Tao anatin'“ny Tatitra 078-04 momba ny Loza Mitatao,” nataony tamin’ny Novambra 2014, niampanga ny “fianjadiana mafy ara-tsosialy, ara-politika sy ara-tafika” ataon’ny tafiky ny milisy ao amin'ilay faritra ny Biraon'ny Mpanelanelana ao amin’ny firenena, ary naneho ny ahiahiny lehibe amin’ny fandrahonana sy fanalam-baràka ny mpitarika ny Vondron’ny Fandriampahalemana. Io sampana io ihany no nitatitra momba ny tetikasa fanaovana trano sy làlana izay novatsiana vola sy namorain’ilay vondrona milisy mahery vaika any amin'ny faritra, ny Gaitanista Hery Fiarovan-tena ao Kolombia (AGC). Manaraka ny faritra haleha amin’ny fanamboaran-dàlana, ny tatitry ny tantsaha mpamboly amin’ny fanerena sy fandrahonana azy handao na hamarotana ny taniny, ary ny AGC avy eo no mivarotra amin'ny orinasa iraisam-pirenena amin'ny vidiny ambony lavitra—raharaham-barotra ahazoana tombony betsaka ao ambadiky ny ady an-trano mandravarava. Na teo aza ireo ezaka maro, tsy nanaiky fanorenana làlana mba handeha hamaky ny taniny ny PC, tamin'ny alàlan'ny fangatahany ireo fikambanana mpanohana mba hanampy amin’ny fanomezana fiarovana fanampiny sy ny hahitàna ny ao amin'ny faritra.
Herintaona mahery hatramin'ny nanaovan’I Santos fialantsiny, tsy notanterahana ny teboka hafa momba ny fepetran'ny CCC, ary mbola hiatrika fanamby mba hitazonana ny tany sy ny fisiany sady manohitra ihany ny ady manodidina azy sy ny tombontsoa ara-toekarena ny Vondron’ny Fandriampahalemana ao San José de Apartadó. Na dia efa nihena hatramin'ny fiandohan'ny taona 2015 aza, ny fanalàm-baràka nataon’ny Borigadim-paritry ny Tafi-Pirenena amin’ny PC sy ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona, ary ny fandàvana hatrany tsy hanome azy ireo ny ara-drariny, dia tsy hoe fotsiny manome fisalasalana goavana eo amin'ny fanoloran-tena ataon’ny Fitantanan’I Santos mba hanao ny zon'olombelona ho zava-misy any Kolombia, fa koa ny fahafahany hampihatra ny fifanarahana sarotra mbola eo ampanaovana fifampiraharana amin'ny mpihokon’ny FARC.
Anisan'ny ao anatin'ny FOR Peace Presence (Ho an'ny fisian'ny fandriampahalemana) i Nikki Drake, ONG iraisam-pirenena fanohanana ao Kolombia. Efa niaina sy niasa tany Amerika Atsimo izy nandritra ny telo taona lasa. Tsidiho ny http://peacepresence.org/ raha tianao ny hahafantatra bebe kokoa momba ny asa FOR Peace Presence sy ny Vondron’ny Fandriampahalemana ao San José de Apartadó, .